Indlela yokuxazulula izingxabano emndenini
Ukuphila komndeni akulula ngaso sonke isikhathi futhi kujabulise. Lapho ababili behlala ndawonye, ​​ngokungenakuphika kukhona izimo ezingabangela izingxabano eziholela ekuxabaneni. Omunye uhlangabezana nalezi zikhathi ngokuzithoba, futhi othile ukhetha ama-scandal aphezulu nokucaciswa kobudlelwano bobudlelwane. Kusukela ekukhoneni ama-angles acute, gwema izingxabano, hhayi ukuvusa ukungqubuzana nokunciphisa, kuxhomeke ekuthuleni nasekujabuliseni ukuphila komndeni wakho.
Izizathu zokuxabana komndeni zingaba ziningi. Lezi zithandane phakathi kwezinsuku zansuku zonke, umhawu, ukukhathala, izikhalazo ezidlule. Umhawu mhlawumbe yisisusa esivame kakhulu sokungqubuzana. Ukusola komunye womlingani, ukungavikeleki kwakhe kuye kanye nemizwa yomlingani wakhe, umqondo ongenamakhemikhali ovame ukuholela ekuxabaneni.
Uma lo mbhangqwana uhlala ndawonye isikhathi eside, i-romantic haze igcina iwa futhi impilo ibonakala kubo ngokungafani. Okubalulekile akukona nje ukuqabana nokuxoxa kuze kube sekuseni, kodwa futhi ngephutha ngokukhohliwe izinto esihlalweni, i-toothpaste ehlanjululwe ngethambo lokugcoba endlini yokugezela, izitsha ezingahlanjululwa ngemuva kokudla. Ngokuvamile ezimweni ezinjalo bathi - impilo ka-zael. I-monotony yokuphila nokukhathazeka nayo impela imithombo evundile yokuthuthukisa izingxabano.
Imibhangqwana eminingi iqala ukuphikisana nokufika kwezingane. Futhi akumangalisi-izidingo nemikhuba yabantu abadala baya ngemuva, futhi ingane iba isikhungo somndeni lapho kuzo zonke izinto ezithandekayo. Ngokuvamile ngezikhathi ezinjalo ubudlelwane bomndeni buphazamisa izihlobo. Lapho bezama ukusiza, ukubuyisana nabashadile, baba yisisusa sezimpikiswano ezinkulu nakakhulu.
Ukuncintisana jikelele nokuphila okungenakuqiniswa akubambi ekuthuleni emndenini. Izinkinga ngezindlu, ukuntuleka kwemali, ukungakwazi komunye womlingani ukuwanelisa izidingo zabo - konke lokhu kuholela ekuxabaneni okungenakugwema.
Abantu abadala abakwazi ukuxabana, ekugcineni, sonke sishiya ebuntwaneni isikhathi eside, lapho izinkinga zixazululwa kuphela yizingxabano - ngokwakho, izihlobo nabangane. Noma yikuphi ukungqubuzana kungashintsha ingxabano eyakhayo futhi udwebe iziphetho ezifanele.
Khumbula, ngukuphi ukuxabana emndenini wakho kuqala. Kungenzeka ukuthi kuvela ukuthi ngezimangalo zomphakathi kanye nokuhlambalaza. Abashadile baxoxisana izinto, bekungakhathaleli imizwa yomunye nomunye. Zama ukugwema lokhu. Akudingekile ukuthi utshele oshade naye ukuthi "uhlale uphonsa amasokisi akho!", Kungcono ukuchaza ukuthi uchitha isikhathi esiningi ukuhlanza izinto zakhe, kepha ngalesi sikhathi ungakwenza okuthile okuwusizo futhi kujabulise. Ngokuvamile ethule, izicelo ezinengqondo zenza kangcono kunamacala amabi.
Into elandelayo eyenza ingxabano egcwele kakade imemeza. Sicela wazi ukuthi ingxoxo emathoni aphezulu ngeke asebenze. Ukumemeza kungukuhlukunyezwa, kwenza omunye umuntu azivikele ngendlela yakho, okungukuthi, khala. Ngenxa yalokho, abashade ezinhliziyweni zabo ngokukhawuleza baphelela umngane yonke intukuthelo, yonke imizwelo emibi enganakho okuhlangene nezinkinga zomndeni. Ngakho zama ukuthula futhi ubuze oshade naye ngendlela efanayo.
Uma uhlose ukuphikisana okwakakhayo, kunokuba kube nokuxabana kokubambisana, bese uthatha ikhefu engxoxweni uma uzizwa ukuthi izifiso zakho ziyashisa kakhulu.
Enye indlela yokwehlisa lolu daba akumele ukuqoqa izikhalazo kanye nemizwelo emibi emasontweni, izinyanga neminyaka, ngaphandle kwalokho ngosuku olulodwa luzophela ekuxabaneni okukhulu. Uma kukhona okucasuliwe noma okukucasule, khuluma ngemizwa yakho ngesikhathi esisodwa. Khuluma ngalokho okubangele ukudumazeka kwakho, nokuthi yini ozizwayo ngenkathi uyenza.
Ngeshwa, abantu bangabe bekholelwa ukuthi ngeke kube nokuxabana emndenini wabo nhlobo, noma baxazulule izinkinga lapho lezi zinxabano sezivele ziningi. Ubudlelwane buhlolwe ngezindlela ezehlukene, izingxabano kanye nokuphikisana, okufaka phakathi, noma kunjalo, emva kwezinkathazo isikhathi eside kukhona umuzwa wokubhujiswa nentukuthelo. Okokuqala kuqala ngento encane - ngezwi elihle elihlekisa, khona-ke abashadile bavumela ukukhala okunye okuhlambalazayo, izinsolo ezingathí sina ngisho nokuthukwa komunye nomunye. Kungenakwenzeka ukuyeka, yingakho izingxabano phakathi kwemindeni eminingi zifana nezenzo zempi ngokwezinga lokuhlukunyezwa nokubhujiswa.
Uma ushiya konke okuyikho, amaphupho enjabulo yomkhaya ayohlala ephupho. Kunzima kakhulu ukujabulela ukuphila, lapho umuntu osondelene engabangeli imizwelo ehloniphekile, inhlonipho futhi uphikisa njalo, lapho kufanele asekelwe. Ngakho-ke, kuyadingeka ukuthi ufunde ukukhuluma ngokuthula, uxoxisane nomunye futhi ulalele umbono womuntu wonke.
Okokuqala, thola ukuthi yini ebangela ukuthi izingxabano zakho zivame kakhulu futhi imizamo ehlangene iyayilahla. Zama ukuvuma ukuthi umndeni nobuhlobo bakho bubaluleke kakhulu kunenkathazo, futhi ukuthula emndenini kubaluleke kakhulu kunokuxabana okungenangqondo nezikhalazo. Akungabazeki ukuthi omunye wabashade ufuna enye okubi, kungani emcasula othandekayo? Khumbula njalo ukuthi ngaphambi kwakho - umuntu ophilayo ongenakho ukungaphumeleli, kodwa nguyena oyithandayo. Khona-ke isifiso sokuxabana siyovela kaningi. Funda ukufuna unecala, kodwa izindlela zokuxazulula impikiswano, khona-ke uzokwazi ukugcina ubuhlobo obuhle.
Izingxabano zomndeni yisinyathelo sokuqala sokuhlukanisa. Benza ubuhlungu obukhulu hhayi kuphela kwabashade, kodwa kubo bonke abantu abaseduze-izingane, abazali, abangane. Izingxabano ezivame ukucindezela, ukwenza umuntu aguquke kangcono, kubonakala kuzo zonke izigaba zokuphila. Kodwa izingxabano zomndeni zingabhidlika uma abantu ababili bethandana, kunoma yikuphi, izingxabano zingaba izingxoxo ngezinkinga - ngaphandle kwama scandals, izinyembezi nokuthukuthela.
Umalokazana nomamazala-i-duet noma unxantathu?
Uhlobo lwegazi nomlingiswa
Inkululeko yomuntu ebuhlotsheni phakathi kwendoda nowesifazane
Ungamisa kanjani ukuxubha futhi ufunde ukuzithanda wena?
Izici zengqondo zezikhundla zesilisa nabesifazane ebuhlotsheni bomndeni
Ama-biscuits we-Ginger no-ukhilimu
Ukuzivocavoca okuhlobisa izingane
Shintsha i-nephropathy ezinganeni, izimbangela
Izindlela ezithuthukisiwe zokunakekelwa kwamazinyo
Imfundo ejulile yezingane ezinebhande
Sandwich nge inkukhu, isithombo kanye nobhontshisi
Shopoholiya - isifo noma ukuzijabulisa okungenacala?
U-Nadezhda Babkina ushaqeka ngobuso obumile ngemuva kokuhlinzwa okungaphumelelanga kwepulasitiki
Izinyunyana zothando ezingaphumeleli kakhulu phakathi kwezibonakaliso ze-zodiac
Funga ukuxubana kwengane
UKsenia Borodina ushaya umyeni wakhe nsuku zonke
Thola isifo endaweni yesikhumba